बच्चालाई रिसाहा बानीबाट कसरी मुक्त गर्ने ? अपनाउनुहोस् यस्ता उपाय « Sansar News
बच्चालाई रिसाहा बानीबाट कसरी मुक्त गर्ने ? अपनाउनुहोस् यस्ता उपाय
८ बैशाख २०७९, बिहीबार १७:५४
काठमाडौं । बालबालिकाको उचित पालनपोषण हरेक अभिभावकको प्राथमिकता हो। आमाबाबुले आफ्ना बच्चाको लागि सबै कुरा राम्रो होस् भन्ने चाहन्छन्। आमाबाबुले आफ्नो बच्चाको इच्छा पूरा गर्न र अनुहारमा मुस्कान ल्याउन धेरै गर्छन्। तर यी सबैको बावजुद कहिलेकाहीँ कतिपय बालबालिकाले आफ्नो असन्तुष्टि क्रोधको रूपमा देखाउँछन्।
आमाबाबु बच्चाको आवश्यकताहरू बारे सचेत हुनुपर्छ तर, बच्चाको व्यवहारको बारेमा पनि सचेत हुन उत्तिकै जरुरी छ । यदि तपाईंको बच्चा रिसाउँछ भने, उनको भावना बुझ्न प्रयास गर्न आवश्यक हुन्छ । नाकमा रिस उठ्ने बालबालिकाहरू प्रायः आफ्नो दुःख व्यक्त गर्न असमर्थ हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरु रिसाएर कुनै कुरामा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन्छन् । तर जहिले पनि रिसाउनु न स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ न भविष्यका लागि। यस्तो अवस्थामा, यदि तपाईंको बच्चाको नाकमा रिस उठ्छ भने, यी तरिकाहरू अपनाउनुहोस्।
क्रोधको स्तर बुझ्नुहोस्
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बच्चाको रिसको स्तर के हो भनेर तपाईंले जान्नुपर्छ। तपाईंले बच्चालाई ० देखि १० बीचको आफ्नो क्रोधको प्यारामिटर सेट गर्न सिकाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा, जब तपाईंको बच्चाले तपाईंलाई आफ्नो रिसको स्तर बताउँछ, तब तपाईंले उसलाई सोही अनुसार व्यवहार गर्नुहुन्छ। यो प्यारामिटर मार्फत बच्चाले आफ्ना भावनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न पनि सिक्नेछ।
भावनाहरू महसुस गर्नुहोस्
केटाकेटीलाई भावना के हो सिकाउनुहोस्। तपाईंको बच्चाले आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्न सक्षम नहुन सक्छ, जसका कारण ऊ छिट्टै रिसाउँछ। यस्तो अवस्थामा, यदि उसले आफ्नो मनको सही भावनालाई थाहा छ भने, उसले रिसाउनुको सट्टा आफ्नो भावनालाई तपाइँको अगाडि व्यक्त गर्नेछ।
बच्चाको रिसको जवाफ रिसले नदिनुहोस्। यसले दुबै पक्षमा क्रोध मात्र निम्त्याउनेछ र उसले आफ्नो मनको कुरा बताउन सक्दैन। यदि तपाईंको बच्चा कुनै कुरामा रिसाएको छ भने, उसलाई समस्या सोध्नुहोस्। उहाँको क्रोध शान्त होस् भनेर प्रेमपूर्वक व्याख्या गर्नुहोस्।
जिद्दीलाई ख्याल गर्ने
धेरै बच्चाहरू जिद्दी वा तान्त्रिक हुन्छन्। आफ्नो हरेक माग पूरा हुनाले उसको स्वभाव यस्तो बन्छ कि उसको कुनै कुरा मानिएन भने रिसले चिच्याउन थाल्छ । उनीहरु रिसाउँछन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको मनको सबै कुरा नसुन्नुहोस तर उनीहरुको जिद्दीको कारण सोध्नुहोस् । अर्कोतर्फ, यदि उसले तपाईलाई रिसाएर केहि सोध्छ भने, उसको कुरा कहिल्यै नसुन्नुहोस्। ताकि बच्चाको मनमा यो कुरा रहिरहोस् कि क्रोधित भएर उनीहरुको कुनै माग पूरा हुँदैन । एजेन्सीबाट
कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकोले संवेदनशील र जिम्मेवार…
चिया–कफीको साटो यी पेय पदार्थबाट सुरु गर्नुहोस् दिनको…
शरीरलाई उर्जावान बनाइरहन कस्तो खानेकुरा खाने ?
के हो मोबाइल विकिरण ? यसले कस्तो असर…
चुनौती बन्दै मानसिक स्वास्थ्य, विज्ञबाट जान्नुहोस् कसरी फिट…